Ukuvakasha kwefektri - Shanghai KTG Auto Technology Co., Ltd.
Isitshalo sethu sinayo yonke imishini kufaka phakathi i-CNC, imishini yokugaya njll. Okwamanje kunemishini eminingi yokuhlola efana ne-High / low pressure Tester, Tester Leakage, High / Low Temperature Performance Tester, EPB Performance Tester, Hydraulic Performance Tester, Projector for Rubber Parts Ukuhlolwa, i-3D edidiyela Ithuluzi Lokulinganisa, njll.
Sihlala sinamathisela ukubaluleka kokuthuthukiswa komkhiqizo omusha nocwaningo. Sizoqhubeka nokuthuthukisa izingxenye zezinombolo ezithandwayo, futhi sandise imakethe yethu ngokumbozwa okugcwele, i-suit yemakethe ehlukile emhlabeni jikelele. Siziqhayisa ngethimba lezinga eliphezulu, sinemishini yokuhlola esezingeni eliphakeme kanye nohlelo lokuphatha ikhwalithi eqinile. Okwamanje, ukuthuthuka kwethu okuqhubekayo kwezobuchwepheshe, ukuphathwa okuhle kakhulu kwesayensi, ikhwalithi yomkhiqizo engaguquki nensizakalo ephelele emva kokuthengisa yenza imikhiqizo yethu yaziwe ekhaya nakwamanye amazwe.